Ra'iisul Wasaare Rooble oo u mahad-celiyey dowladda Sacuudiga kadib markii ay... - Caasimada Online
Home Warar Ra’iisul Wasaare Rooble oo u mahad-celiyey dowladda Sacuudiga kadib markii ay…
Ra’iisul Wasaare Rooble oo u mahad-celiyey dowladda Sacuudiga kadib markii ay…
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay qaabilay safiirka Dowladda Boqortooyada Sacuudiga Carabiya u fadhiya Soomaaliya Mudane Axmed Bin Maxamed Al-Muwalad.
Kulanka ayaa waxay labada masuul uga wada-hadleen xiriirka labada dal iyo sidii loo sii xoojin lahaa, ayada oo Ra’iisul Wasaaraha uga mahadceliyay Dowladda Sacuudiga garab istaageeda Soomaaliya ee dhinacyada kala duwan hadda iyo xilliyadii adkaa ee dalku soo maray.
Sidoo kale waxa uu rajeeyay in xiriirka labada dal uu sii wanaagsanaado ka dib doorashadii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo mudnaan gaar ah siinaya sara u qaadista xiriirka walaalnimo iyo iskaashi ee Soomaaliya la leedahay Sacuudi Carabiya.
Safiir Axmed Bin Maxmed Almuwalad ayaa dhankiisa Ra’iisul Wasaaraha iyo guud ahaan dowladda Soomaaliya uga mahad-celiyay sidii wanaagsaneyd ee dalka loogu soo dhaweeyay iyo wadad shaqeyntii wanaagsaneyd.
Waxa uu sheegay in Boqortooyada Sacuudiga iyo hoggaankeedu diyaar u yihiin in Soomaaliya ka gacan siiyaan dhinac kasta, si gaar ah gurmadka dadka abaartu hayso, dhaqaalaha, amniga, la dagaallanka argagixisada iyo wax kasta oo lagama maarmaan u ah horumarka iyo xasilloonida Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa safiirka guddoonsiiyay billaddo sharaf uu ugu talo galay safiirkii hore ee Sacuudiga u qaabilsanaa Soomaaliya mudane Maxamed Khayaad.
Sidoo kale waxa uu Ra’iisul Wasaaruhu billad sharaf gudoonsiiyay xarunta Boqor Salmaan ee gargaarka iyo arrimaha bani’aadminimada oo kaalin weyn ka qaadaneysa gurmadka dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay.